Himali Khabar टिप्स Archives - Himali Khabar
स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ अपनाउनुहोस् यी उपाय
१९ असार २०७८, शनिबार | Himali Khabar
काठमाडौैं । हामीले यदि साँच्चिकै आफूलाई स्वस्थ राख्ने हो भने केही त्यस्ता प्रण गर्न जरुरी छ, जसले निरोगी बन्न सकिन्छ । शरीरलाई स्वस्थ राख्ने संकल्प गर्न नयाँ वर्ष कुर्नुपर्दैन, आजैदेखि सुरु गर्नुहोस् । १) तनाव भगाउनुहोस्आफ्नो करिअर, परिवारप्रतिको जिम्मेवारी, कामको...
शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? यी हुन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार | Himali Khabar
काठमाडौं, १६ फागुन । पछिल्लो समय शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार अनलाइन शेयर कारोबारका लागि ३ लाख २७ हजारले युजर नेम र पासवर्ड लिइसकेका छन् । डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या पनि...
धेरै समय इयरफोन प्रयोग गर्ने बानी छ ? यस्ता समस्या आउन सक्छ
काठमाडौं, ६ फागुन । मानिसका अनेकन चाहना हुन्छन् । यात्राका क्रममा होस् वा घरमा बस्दा नै किन नहोस् । कानमा एयरफोन राखिरहनुपर्ने, गीत संगीत सुनिरहनुपर्ने । कलेज पढ्न जाने विद्यार्थी हुन् वा कार्यालयमा काम गर्न गएका कर्मचारी नै किन नहुन्,...
समृद्धिको चित्र, विकास विचित्र : सडकको बीचमै रूख राखेर कालोपत्रे